Ko kana dhora richiwa zvakanyanya? | Ehupfumi Zvemari
Imwe yemhedzisiro yemitemo yezvehupfumi neyemari yemutungamiri mutsva weUnited States, Donald Trump, ndeyekuti mari yayo, ndiko kuti, dhora reUS rinogona kudzikira mumwedzi iri kuuya. Zvakare, vaongorori vazhinji vanoenda kumberi nekufungidzira kuti ichi ichokwadi chaicho chekuti vashambadzi vadiki nepakati vanozotarisira kuita yavo portfolio yekudyara. Kusvika padanho rinozoona kudzoka kwako.
Nekuti zvirokwazvo, isina simba dhora ine mhedzisiro yakawanda, kwete chete pane hupfumi hwakawanda, asi zvakare pane zvaunofarira iwe sewe investor. Izvo hazvina kuganhurirwa pakutenga nekutengesa kwe masheya muzvikwereti, kana zvisiri kune mamwe misika yemari. Zvimwe zvacho zvakatonyanya kuita zvekutanga, senge simbi dzinokosha. Kunyangwe, hongu, ichave iri mari iyo ivo pavanozonyanya kuona iko kuchinja kweshanduko pakati pemari dzakatengwa zvakanyanya nevashandisi.
Kana iwe uchida kuziva zvichaitika mumisika ne kudzora dhoraHapana chinhu chiri nani kupfuura mamwe matipi anozokubatsira kushambadzira mashandiro ako uine vimbiso huru yekubudirira. Hazvirevi kuti iyo mamiriro ezvinhu asiri echokwadi, asi inogona kunge iri iyo inoitika chaizvo. Chero zvazvingaitika, zvinokuunzira mikana mitsva yebhizinesi, mimwe yacho inonakidza uye neimwe nzira yekuvandudza. Kubva pamisika irikubuda kuenda kune dzimwe nzira dzekudyara. Muchidimbu, mafomu matsva ekudyara ari kuvhura kwauri kubva ikozvino.
1 Dhora: zvinokanganisa misika?
2 Nyika dzichiri kusimukira dzinogona kukwira
3 Shanduko yemari yekuNorth America
4 Vamwe vakaderera madhora vanokunda
5 Kushanda mumisika yemari
Dhora: zvinokanganisa misika?
Chiitiko chemari yekuNorth America pakukwira ichi chinoreva shanduko huru muhurongwa hwako hwekudyara kubva pakutanga. Ichave inguva yakakodzera yekuvhara zvigaro mune mamwe acho uye vhura ivo mune vamwe. Nekuti mukuita, iwo matanho esimba ari kuzosiyana nekusimba kukuru. Kusvika padanho rekuti kare yanga isingagamuchire ako ekudyara, kubva ikozvino zvichienda zvichave. Iwe unofanirwa kuratidza kugona kukuru kutarisira zviitiko uye nenzira iyi iwe unogona kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire nesimba rakakura.
Nekuti kana dhora richiwa zvakanyanya, ichave nguva yekuti iwe utarise kumisika irikubuda. Chimwe cheanopa mazano, kunyangwe paine njodzi, zvinoenderana nekuwedzera kutarisana kwako neRussia equities. Zvinoita sekunge zvinogona kudaro chimwe chezvakanaka kushamisika yeichi chitsva musika wekutengesa. Hazvishamise kuti iwo makuru ehupfumi zviratidzi zvinoratidza izvi. Kusvika pakuti ingangove nguva yekuti utange iyi mamiriro matsva muhukama hwako nenyika yemari neyako yekutanga mashandiro.
Chimwe chechokwadi chinotsigira iyi nyowani sarudzo mukudyara ndechekuti iyo mutengo wemafuta icharamba ichikwira mukati megore rino. Kunyangwe nesimba risina kujairika, sekubvuma kwevamwe vaongorori vane mukurumbira vemisika yemari. Muchiitiko ichocho, ichafarira hupfumi hweSlavic nekuda kwekutsamira kwayo kwakanyanya pane goridhe nhema. Iko pamusika weRussia wemusika ungasimudza iyi nyowani macroeconomic mamiriro nekukwira kwakasimba. Tichifunga izvi, unogona kuvhura zvigaro mumusika wepasi rose wekuenzana.
La hupfumi hweRussia Yakarova zvinotarisirwa nevaongorori, donhwe re0,5% raitarisirwa uye pakupedzisira raive -0,2% uye kukura kunotarisirwa gore rino. Iyi data inotsigira maitiro angave ari eimwe emari zvinhu zvekutarisa gore rino. Iine mikana chaiyo mukudzokororazve uye iine kukosha kwakanyanya kukura zvichienzaniswa nemamwe misika yechinyakare.
Nyika dzichiri kusimukira dzinogona kukwira
Kwete chete iyo Russia ndiyo nyika inogona kubatsirwa neiyi nyowani mamiriro ehupfumi. Zvakare dzimwe nyika dzichiri kusimukira dzine huremu chaihwo pane bhodhi rezvehupfumi renyika dzese. Imwe yacho pasina kupokana Brasil, kana ikawana kugadzikana kwezvematongerwo enyika. Iine yakanyanya kukwirira yekuongorora mikana uye pamusoro iyo yakapihwa nemamwe misika yemasheya. Iyo imwe nzvimbo kwaunogona kuchengetedza mari yako kwemwedzi mishoma inotevera. Ivo havazi njodzi mukufumura iwe kwaunogadza kubva zvino zvichienda mberi.
Humwe hupfumi hwepasi rose hunogona kutora mukana wechiitiko ichi unosanganisira vamwe vanobva kuSoutheast Asia uye kunyanya ma latin americans. Vanogona kukupa kanopfuura kamwe chete kushamisika kwakanaka kubva panguva dzino. Zvakare iwe haukwanise kukanganwa nezve yemusika wekutengesa muIndia, iyo kwemwedzi yakati wandei yanga ichisangana nekumwe kudzoka kwakanakisa pamari yepasirese. Pamusoro pemisika mikuru yemari iri mundangariro dzevatengesi vakuru.
Shanduko yemari yekuNorth America
Idzi nzira dzese dzekudyara dzinogona kuitika chero iko kuwirirana kwemasimba kunoitwa pakati pemari dzinotungamira dzekunze kwemari kurongeka. Nekuti zvirizvo, zvese zvinoita kunge zviri kuenda munzira iyoyo. Kusvika pakuti zvese zvinonyatsoratidza kuti dhora icharamba ichiderera mumwedzi mishoma inotevera. Neshanduko mune yemari portfolio iwe yaunofanirwa kuita kubva zvino zvichienda mberi.
Nenzira iyi, musika wemari uchave mumwe wemari yemari iwe yaunofanirwa kunyatsoteerera mukati mevhiki dzinouya kana kunyangwe mwedzi. Icharatidza chiitiko chiri pamusoro pezvakajairwa. Nekuwedzera kusagadzikana kunoshamisa kuchanakidza iyo vatengesi. Kana iwe uri mumwe wavo, makorokoto nekuti nguva nyowani iri kuvhurira iwe izere nemasimba akasimba manzwiro uye sarudzo huru kuita kuti mabasa ako abatsire mumusika wezvemari wekukosha kwakadai.
Pamusoro pazvose, iwe unofanirwa kuve nekukurumidza kukurumidza mashandiro aunosimbisa mumisika yemari. Kuburikidza nekuchinjana nedzimwe mari dzehukosha hwakakosha: Swiss franc, British pondo kana iyo euro pachayo. Semhedzisiro yezviito izvi, uchave unokwanisa kuita chero rudzi rwechikumbiro. Kubva pane inonyanya kuchengetedza kusvika kune vane hasha pamisika yemari. Ehezve, iwe hauzove neganhuriro munzira dzako.
Vamwe vakaderera madhora vanokunda
Nekudaro, kuderera kunofambira mberi mumari yeUnited States kunounza vamwe vanokunda maererano nemari yemari uko iwe kwaunokwanisa kuisa mari yako. Musika we nhumbi dzinokosha Chichava chimwe chazvo uye chinoratidzwa pasi pesarudzo dzakasiyana dzekudyara. Kubva pane zvegoridhe zvechinyakare kune zvimwe simbi zvakajairika, senge sirivheri kana palladium. Ivo vakaumbwa seimwe yedzimwe sarudzo dzauinadzo kubva zvino zvichienda nedanho nyowani redhora.
Imwe yeiyo mainstays inomiririrwa nemutengo wemafuta mumisika. Nekuti hapana mubvunzo ichava imwe yemari midziyo iyo inogona kuwana kukoshesa kukuru mukati memwedzi gumi nembiri inotevera. Kunyangwe nemukana wekusvika uye kunyangwe pfuura chipingamupinyi che $ 70 dhiramu. Hazvishamise kuti ndeimwe yeakanyanya kubatsirwa nekuderera kwemari yeUS. Iine hukama chaihwo pakati pesarudzo mbiri.
Kana iwe haugone kukanganwa zvinogona kuitika kune zvimwe zvigadzirwa. Kunyanya izvo zvakabatanidzwa nezvakuru zvekudya uye kuti iwe unogona zvakare kuzvipa iwe inopfuura imwechete mufaro kana iwe ukavhura zvinzvimbo panguva ino. Nekudaro, ivo vachazoda rakakura uye rakadzama ruzivo rwemisika yavo yemari. Uye zvakare, zvinoda kuti iwe uwedzere mari dzako kubva kune akasiyana zvachose zvigadzirwa zvemari pane izvo iwe zvawaishandisa kusvika ikozvino.
Kushanda mumisika yemari
Ehezve, mikana mitsva inozaruka kuti yako yekuchengetedza ibatsire. Zvimwe zvichave zvakati wandei kana zvishoma, asi zvimwe zvichatanga kubva kune dzakawanda nzira dzekudyara. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune iri nani nzvimbo yekukwiridzira mafambiro kutenderera pasirese yemari. Kubva pane zvinotevera zviito zvatinokufumura pazasi.
Iwe unofanirwa kugadzira yako kutanga kufungidzira kumisika yemari. Basa rayo richava pamatanho ari pamusoro pechinyakare. Kunyangwe ichigara iri pasi peyakaderera mari yekudyara inosvika. Semubatsiri kune zvako zvaunowanzoisa mari mumisika yemari.
ari mamwe masoko ichava mamwe emahofisi kwaunofanira kutarisa kuisa mari yako. Iwe une zvirevo zvakakwana zvekugutsa zvaunoda, kunyangwe kubva kune zvisinganzwisisike zvemari zvinhu zvingaratidzika kwauri panguva ino.
Kuenderera mberi pasi mumutengo wedhora reUS kunofanirwa kuita chinja portfolio kubva kune dzimwe nzira dzakasiyana. Kusvika padanho rekuti unofanirwa kutsiva mari dzese dzawaive nadzo kusvika zvino.
Mune imwe mari yekudyara, uye kuchengetedza yako investments, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwe kufukidza mashandiro ako nemari inobvumidzwa, mune ino euro. Icho chirongwa chinoshanda kwazvo cheidzi zviitiko.
Iva nehanya kwazvo ne zvigadzirwa zvepamusoro zvemari. Iwe unofanirwa kuziva maitiro ekushanda navo mumamiriro ezvinhu akakosha seichi, nedhora richiramba richigadzirisa nzvimbo dzaro. Chete kana iwe uine ruzivo ndipo paunogona kuvhura nzvimbo munzvimbo idzi dzekuchengetedza mamodheru.
Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekutarisa izvo zviwanikwa zvemari izvo dzakatorwa mumadhora kana maeuro. Nekuti zvinoenderana neshanduko yakakosha iyi, vanozove vanofarira kugamuchira kupokana kwechido chako chitsva. Semuenzaniso wechiitiko ichi, simbi dzakakosha dzinogara dzakanyorwa mune yekutanga. Chichava chiratidzo chidiki nezve zvaunofanira kuita nemari yako.
Uye pakupedzisira, usazeze kuwedzera kune iyo misika yezvemari iyi maitiro emari yeAmerica inobatsira. Kwete chete ivo vari kubuda, asi kunyange vamwe kupfuura zvikwata zvekunze kuti kusvikira zvino wanga usina kufunga kupinda mazviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ko kana dhora richiwa zvakanyanya?
mari yegoridhe kana yedhijitari mari yedhijitari yemari inodyara inotsigira kutsigira kwemafuta ekuchengetedza emangwana.
Kuisa mari muzvikwata zvematunhu: imwe nzira yekuchengetedza